Gaari u lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo la qarxiyaya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Gaari u lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo la qarxiyaya
Gaari u lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamanka Soomaaliya oo la qarxiyaya
Gaari uu lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa saakay lagu qarxiyay agagaarka Masaajidka Marwaas ee degmada Xamar weyne, iyadoo gaariga la sheegay in xalay lagu xiray miinada.
Gaariga ayaa waxaa lahaa Xildhibaan lagu magacaabo C/llaahi Axmed Xuseen oo degenaa Hotelka 900 ee degmada Xamar weyne, waxaana uu gaariga dhigan jiray banaanka Hotelka sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska.
Wararka ayaa sheegaya in markii la ogaaday in gaariga uu ku xiran yahay miino lagu wargeliyay Ciidamada booliska iyo kuwa miino baarista, kuwaasoo goobta si deg deg ah ku soo gaaray, waxaana ay xireen wadooyinka, waxaana gaariga uu qarxay inta aanay ciidamada isku dayin inay fur furaan.
Gudoomiyaha degmada Xamar weyne C/qaadir Maxamed C/qaadir ayaa sheegay in ciidamada ay fashiliyeen qaraxa gaariga loogu xiray Xildhibaanka, kadib markii lagu soo wargeliyay, waxaana uu sheegay in gaariga ay qarxiyeen kooxihii miinada ku xiray gaariga, markii ay ogaadeen inay fashilmeen, ciidamadana ay ka war heleen.
Gaari uu leeyahay ayaa xalay ilaa shalay yiilay hotel 900 gaarigaas miino lagu xiray saakay aroortii salaada subax kadib nagula soo wargeliyay, isla markii ka hortag sameynay wadooyinka xirnay, gawaarida waa la hakiyay, dadkii waa laga fogeeyay, ragii miinada ku soo xiray meesha taagnaa ayaa qarxiyay, markii ogaadeen inay fashilmeen”ayuu yiri Gudoomiyaha degmada Xamar weyne.
Waxaa uu sheegay in Xildhibaanka gaariga loogu xiray miinada uu saakay rabay iuu aado Xarunta Baarlamaanka, hase ahaatee ciidamada amniga ay ka war heleen in gaariga ku xiran yahay qaraxa, ayna bad baadiyeen sida uu yiri.
21-kii bishii hore ayay aheyd markii gaari uu lahaa Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo lagu magacaabayay Isaaq Maxamed Cali Riino qarax loogu xiray gaadiidkiisa uu ku geeriyooday degmada Xamar weyne, iyadoo maalin kadib Xildhibaan kale lagu dilay magaalada Muqdisho.
Previous articleWasiirka Amniga oo ka codsaday in la qisaaso Ragii dilay Gabadhii ardayada aheed
Next articleTarsan ugu baaqay faah faahin dheeraad ah in laga bixiyo qaabkii uu u dhacay dilkii Abdi kaafi Hilowle